China Hospital Automatic Hermertic sliding umnyango kwigumbi lokusebenza Manufacture and Factory | Ezong Iqela
Isibhedlele esiziSebenzisayo seHermertic umnyango otyibilikayo kwigumbi lokusebenza
Ukuvulwa kwecala loMbane
Inkxaso yobugcisa kwi-Intanethi, uQeqesho kwi-Onsite, iinxalenye zasimahla ezisecaleni
Ikiti yocango oluzenzekelayo lwegumbi lotyando esibhedlele
Ingxubevange yeAluminiyam, HPL
Hardware: Steinless steel
Ziziphi iindlela zokuvula umnyango ozenzekelayo wegumbi lokusebenza?
Olona khetho lusetyenziswa kakhulu: iswitshi yentsimbi yokungena emnyango, iswitshi yokuphendula unyawo, igama lokugqitha kunye neminwe, inzwa yemicrowave, ukuqondwa kobuso, njl.
Iimpawu zeHermetic Door
Izinto eziphathekayo zihambelana nokusingqongileyo kwaye zisempilweni.
Okokuqala, izinto ezikhethiweyo zomnyango ococekileyo zinombala wensimbi oluhlaza kunye nokusingqongileyo, okungenabuthi kunye nencasa, kwaye ingongoma ephambili kukuba ayinayo i-formaldehyde kunye ne-toluene. Iingcango ezisebenzisa ezo zinto zirhabaxa kunye nombala omnye azikwazi ukuhlangabezana neemfuno zabantu. I-organic coating kumphezulu wepleyiti yentsimbi enemibala etyebileyo ineempawu zenkangeleko entle, ukuxhathisa okulungileyo kokuhlwa, umbala oqaqambileyo, ukomelela okuphezulu, kunye nokusebenza ngokulula.
Ngaphambili: isibhedlele / umnyango zonyango kunye neengcango zombala womthi laminate Eco-ucango sebenzisa MDF / melamine / HPL panel
Okulandelayo: Uqwalaselo olucocekileyo lweWindows lwenkqubo yegumbi eliCocekileyo